ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်နှလုံး | The Broken Heart | Real Conversion
၂၀၁၂၊ဇူလိုင်လ၂၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊
သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ယဇ်မူကား၊ ကျိုးပဲသောစိတ်ပေ တည်း၊ အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကျိုးပဲကြေမွသောနှလုံးကို ငြင်းပယ်တော်မမူတတ်ပါ”(ဆာလံ၅၁း၁၇)။
(၁၈၁၃-၁၈၄၃ခုနှစ်၊ ရောဘတ်မိုရေ့မက်ချေနီ၏ တရားဒေသနာတော်ထဲမှ ကောက်နုတ်ပြီး ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မက်ချေနီသည် စကောတလန်နိုင်ငံနိုးထ ရေးအတွက် ဘုရားသခင်အသုံးပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် သူ၏အသက် သုံးဆယ့်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲတော်ကိုသာ ကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး၊ အသက်ငယ်စဉ်မှာပင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုဆရာကြီးက၊ အနှစ်တစ်ထောင်ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော်ရှိသည်ကို ယုံကြည်ထား သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးသော ခေတ်ကာလ၌ ဂျူးလူတို့သည် မိမိတို့နယ်မြေ၌ ပြန်လည်၍ စုရုံးလာကြမည်ဖြစ်၍၊ ထိုအခါ ဂျူးလူတို့သည် စိတ်နှလုံးအသစ်ပြောင်း လဲကြပြီး ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ ဖြစ်လာကြမည်ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သူဖြစ် ပါသည်။ ထိုသူက “ဘုရားသခင်ထံတော်၌ ဣသရေလူများ အသစ်တဖန်မွေးဖွါး လာကြမည်”ဟူ၍ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဒူကန်မက်သဆန်က၊ သူ့၏ငယ်ရွယ်သေးသော တရားဟောဆရာ အကြောင်း ကို ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “သူသည် နဖူးထက်၌ ထာ၀ရအမှတ်တံဆိပ်ကို ခတ်လျှက်တ ရားဟောကြားခဲ့သူဖြစ်သည်”ဟု ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ အချိန်နှင့်အမျှ ဟောကြားခဲ့သော မက်ချေနီ၏ တရားဒေသနာတော်ကို မျှဝေပေး ပါမည်၊ ၎င်းတရားဒေသနာတော်က “နှလုံးကြေကွဲလျှက် နောင်တရသူတို့အဖို့၊ ယေရှုဘုရား၏ ချစ်မေတ္တာနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်း မင်္ဂလာသည် သက်ရောက်နေမည်ဖြစ် သည်။
“ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ယဇ်မူကား၊ ကျိုးပဲသောစိတ်ပေတည်း၊ အိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သည် ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်ကို ငြင်းပယ်တော် မမူတတ်ပါ” (ဆာလံ၅၁း၁၇)။
ဟေဗြဲဘာသာစကား နောင်တရသည်ကို တစ်စစီဖြစ်အောင် ထုသည်၊ ခြေသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက “ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မက်ချေနီကလည်း ဆာလံကျမ်းတော်မြတ်၌ မှားယွင်းခဲ့သော အမှားအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းကို ဖေါ်ပြသောကျမ်းထက်ပိုသော ကျမ်းဟူ၍ မရှိတော့ပါ။ နှိမ့်ချစွာဖြင့် အပြစ်အတွက် ဝန်ချတောင်းပန်သည်ကို အပိုဒ်(၃၊၄၊၅)တို့၌ ၎င်း၊အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောပြီး ခွင့်လွတ်ခြင်းရယူသည်ကို အပိုဒ်ငယ်(၇)၌၎င်း၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စင်သော စိတ်နှလုံးသစ်ကို ရသည်ကို အပိုဒ်ငယ်(၁၀)၌၎င်း၊ ဘုရားသခင်၌ ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်ဖြင့် အသက်ဝိညာဉ်ကို ဆက်ကပ်အပ်နှံပြီး ဘုရားသခင်အထံတော်က ကြီးမားသော အကျိုးကျေးဇူးကို လိုချင်တောင့်တခဲ့သည်ကို အပိုဒ်ငယ်(၁၆၊၁၇)တွင် တွေ့ရသည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်အရ၊ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီစဉ်၌ သိုးကိုအသေသတ်ဖူဇော်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ ယ္ခုတွင် ဒါဝိဒ် သည်လည်း ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်ဖြင့် တင်လှူပူဇော်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကနေ့ည၌လည် ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်ဖြင့် ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြ ဖို့ရန် အကျွန်ုပ်မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးပါသည်။
အသစ်သောပဋ္ဌိညဉ်တရား၌လာသည်ကား “မိမိညီအစ်တို့ကို မုန်းသောသူမည်ကား လူအသက်ကိုသတ်သောသူဖြစ်၏ လူ့အသက်ကို သတ်သောသူသည် တစ်စုံတယောက်မျှ ထာ၀ရအသတ်မတည်သညိကို သင်တို့သိကြ၏”(၁ယော၃း၁၅)၊ ဒါဝိဒ်သည် လူ့အသက် ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အကျွန်ုပ်၏ ထင်မြင်ချက်အရဆိုရင်၊ ဒါဝိဒ်မင်းကြီး အမှန်သိ မြင်ခဲ့သောအရာသည် ဤနောက်ဆုံးသော ဓမ္မသစ်ကာလ၏ အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲခြင်း၏ အလင်းတန်း တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါသမ္မာကျမ်းကို ဖတ်ကြည့်ကြပါစို့လား၊
“ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ယဇ်မူးကား၊ ကျိုးပဲသောစိတ်ပေတည်း အိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သည် ကျိုးပဲကြေမွသော နှလုံးကိုငြင်းပယ်တော် မမူတတ်ပါ” (ဆာလံ၅၁း၁၇)။
၁။ ပထမ၊ဇာတိပကတိစိတ်နှလုံးသည် ကျိုးပဲကြေမွခြင်းမရှိပါ။
ဇာတိပကတိစိတ်နှလုံးကို မည့်သည့်အရာအားဖြင့် မချိုးဖဲ့နိုင်ပါ၊ ထိုသူသည် သနားခြင်း ဂရုဏာတော်သော်၎င်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသော်၎င်း၊ သေခြင်းသော်၎င်း စိတ်နှ လုံးကျိုးပဲကြေမွခြင်းမရှိဘဲ့ တွေ့ကြုံနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော် ၌ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ် ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ မာကျောသောဖါရောဘုရင်၏ စိတ်နှလုံးကို ပုံဥပမာအနေဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားပါ သည်။ ကပ်ဘေးတခုပြီးတစ်ခု သူ့အပေါ်၌ ကျရောက်သည့်တိုင်၊ ထိုသူသည် မောရှေနှင့် အာရုန်၏စကားကို နားမထောင်ခဲ့ပါ၊ “နှလုံးခိုင်မာ၍ သူတို့စကားကို နားမထောင် ဘဲနေပြန်၏” (ထွက်၈း၁၅)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ သူ့၏သားဦးကပ်ဘေးကျရောက် သည့်တိုင်အောင်၊ ဖါရောဘုရင်၏ စိတ်နှလုံးသည် ခိုင်မာနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငရဲထဲသို့ ကျရောက်ခဲ့သော သူဌေးကြီးသည်လည်း ငရဲထိတိုင် စိတ်နှလုံးခိုင်မာလျှက်၊ အာဗြဟံနှင့် စကားငြင်းခုံနေဆဲဖြစ်သည်! (လုကာ၁၆း၃၀)၊ သေခြင်းနှင့်ငရဲမင်းကလည်း သူ၏စိတ်နှလုံးကို နူးညံ့သိမ်မွေ့အောင် မသွန်သင်မဆုံးမနိုင်ခဲ့ပါ! သူသည် အပြစ်ထဲ နှစ်မွန်းခဲ့ကြောင်း ဘုရားမဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြောင်း၊ နောင်တပင်မရရှိခဲ့ပေ! ခရစ်တော်သည် လက်တစ်ဖက် သေသောသူကို အနာငြိမ်းသောအခါ၊ ကိုယ်တော်သည် “သူတို့စိတ်နှလုံး မိုက်မဲခြင်းကြောင့်၊ ဝမ်းနည်းခြင်းရှိခဲ့သည်”(မာကု၃း၅)၊ နမိတ်လက္ခဏာကို သူတို့သည်မြင်ခဲ့သော်လည်း သူတို့စိတ်နှလုံး နောင်တရရှိခဲ့ခြင်းမရှိကြပါ။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုကလည်း စိတ်နှလုံးခိုင်မာ၍ နောင်တမရသော သူတို့အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို မသိမမှတ်သော သူတို့အကြောင်းကို ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ (ရောမ၂း၅)။ ပညတ်တရား၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၊ သနားခြင်း ဂရုဏာတော်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သေခြင်းနှင့်မီငရဲစသောအရာတို့ဖြင့်၊ နောင်တမရသော ဇာတိပကတိ လူသား၏ စိတ်နှလုံးကို မချိုးဖဲ့နိုင်ပါ! ထိုသူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် ကျောက်တုံးထက်ပင် မာကြောကြပါသည်။ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း မခံရသောသူတို့၏ စိတ်နှလုံး မာကြောခြင်းထက် မာသောအရာ ဤကမ္ဘာစာင်္ကြာ၀ဌါတခုလုံး၌ ရှာတွေ့မည် မဟုတ်တော့ပေ၊ ယေရမိမိန့်တော်မူသည်ကား၊ “မိမိတို့မျက်နှာကို ကျောက်ထက်သာ၍ မာစေကြပါပြီ” (ယေရမိ ၅း၃)ဟူ၍ မိန့်တော်မူထားပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် အသက်တာမပြောင်းလဲသော သူတို့၏ စိတ်နှလုံးမာကြောကြရသ နည်း? သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ သူတို့စိတ်နှလုံးသည် ဖုံးအုပ်ထား သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ “သူတို့၏ စိတ်နှလုံး သည် ဖုံးအုပ်လျှက်ရှိ၏” (၂ကော၃း၁၅)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဇာတိပကတိ လူသား၏ စိတ်နှလုံးသည်၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်ကို မယုံကြည်နိုင်ပါ၊ ပညတ်တရားကို မလိုက်နာ တတ်ပါ၊ အမျက်တော်ကျရောက်လာမည်ကို မယုံကြည်ပါ၊ ထိုသူတို့၏ မျက်စိကိုဖုံးထား သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းတရားကို ထိုသူတို့မမြင်တွေ့ကြချေ။
ဒုတိယအနေဖြင့်၊ စာတန်မာန်နတ်က ထိုသူတို့၏ စိတ်နှလုံးသားကို ထိန်းချုပ် ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ “ငြင်းဆန်သောသူတို့၌ ပြုပြင်သောဝိညာဉ်၏ အလိုနှင့် အညီ၊ ဒုစရိုက်အပြစ်တို့၌ ကျင်လည်ကြ၍” (ဧဖက် ၂း၂)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ “မာန်နတ်သည်လာ၍ တရားစကားကို နှလုံးထဲမှ နုတ်ယူသည်” (လုကာ၈း၁၂)။
တတိယအနေဖြင့်၊ ထိုသူတို့သည် “ဒုစရိုက်အပြစ်၌ သေသောသူ”(ဧဖက်၂း၁)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်၊ သေနေသော ဝိညာဉ်သည် တရားစကားကို မကြားနိုင်ပေ၊ သေနေ သောဝိညာဉ်သည် အပြစ်နှင့်ပါတ်သက်နေသည်ကို မသိနားလည်နိုင်ပေ၊ သေနေသော ဝိညာဉ်ဟူသည် “ဉာဏ်အလင်းကွယ်၍ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲ့သောသူတို့ ဖြစ်ကြသည်” (ဧဖက်၄း၁၈) ဝိညာဉ်သေသောသူတို့သည် “တပ်မက်ခြင်းအလွန်ပြင်းသူ” (ဧဖက်၄း၁၉) ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။
စတုတ္ထအနေဖြင့်၊ ထိုသူတို့သည် မိမိလုံခြုံစွာ အသက်ရှင်နေနိုင်ရေးအတွက်၊ လိမ်ညာပြီး ခိုလှုံရာကိုရှာဖွေသူများ ဖြစ်သည်။ ပရောဖက် ဟေရှာယမိန့်တော်မူ သည်မှာ “သင်တို့က ငါတို့သည် သေမင်းနှင့်မိတ်သဟရ၊ ဖွဲ့ကြပြီး။ မရဏာနိုင်ငံနှင့် အကျွမ်းဝင်ကြပြီ၊ လွမ်းမိုးသောဘေးသည် ချင်းနင်းသောအခါ၊ ငါတို့ရှိရာသို့မရာက်ရ” ဟေရှာယ၂၈း၁၅၊ဟူ၍ မိန့်တော်မူထားပါသည်။ ထိုသူတို့သည် သမ္မာတရား ခံယူချက်တို့ ကိုသာ အလေးထားကြပြီး ခိုလုံရာကိုရကြမည်ဟု မျှော်လင့်ကြပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ထိုသူတို့သည် ဆုတောင်းရုံဖြင့်၎င်း၊ အလှူငွေအသင်းတော်၌ ပေးအပ်တင် ရုံဖြင့်၎င်း၊ လိမ်ညာပြီး နှစ်ခြင်းခံယူပြီးမှ ခိုလှုံရာကိုရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသူများဖြစ်ကြပါသည်။
ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာထဲမှ လွတ်မြောက်ရန်ဆုတောင်းပါ၊ သင့်စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းမှ နောင်တရရန် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပါ၊ အကြောင်းမှာ၊ သင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမ ရှိသောမြေကြီးပေါ်၌ သင်သည်ရပ်တည်နေ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာက သင့်အားတံမြတ် စည်းလှည်းသကဲ့သို့ လှည်းပစ်တော်မူမည်။ သင်သည် သခင်ယေရှုထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ် ခြင်းမရှိလျှင်၊ စစ်မှန်သော မျှော်လင့်စရာသင်၌မရှိပါ။
၂။ ဒုတိယ၊ နိုးကြားသောစိတ်သည် နာကျင်မှုကို ခံစားစေသည်၊ သို့သော် ကျိုးပဲ ကြေမွသော စိတ်မဟုတ်သေးချေ။
“ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ယဇ်မူကားကျိုးပဲသောစိတ်ပေတည်း၊ အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကျိုးပဲကြေမွသောနှလုံးကို ငြင်းပယ် တော်မမူတတ်ပါ” (ဆာလံ၅၁း၁၇)။
နိုးကြားသော စိတ်ရှိခြင်းသည် ကောင်းပေ၏ နာကျင်မ ကို ခံစားစေပါသည်။ သို့သော်၊ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် လုံလောက်ခြင်းမရှိသေးချေ။ သင်၌အမှန်တကယ်ကျိုးပဲ ကြေမွသောစိတ် ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုးကြားသောအသိစိတ်သည် ကျိုးပဲကြေမွသော စိတ်ကိုဖြစ်ပွားရန် ပြင်ဆင်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်နှင့်ပါတ်သက်သော နိုးကြား စိတ်သည် အဘယ်မည်သို့ ဝင်လာပါသနည်း?။
ပညတ်တော်က ဦးစွာသင်အားအပြစ်နှင့်ပါတ်သက၍ နာကျင်မှုကိုခံစားစေပါသည် လူတဦးတယောက်အား ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်လိုသောငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် ထို သူကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်နှင့်ပညတ်တရားကို ချိုးဖေါက်ခြင်းအားစဉ်းစားတွေးခေါ် တတ်အောင် တစုံတရာကိုဖြစ်စေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသည်ကား
“ပညတ်တရား၏အကျင့်ကို အမှီပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် အကျိန်နှင့်စပ် ဆိုင်ကြ၏။အကြောင်းမူကား၊ ပညတ်ကျမ်းစာ၌ပါတ်သမျှသော စကားတို့ ကို အမြဲမကျင့်သော သူတိုင်းကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေသတည်းဟု ကျမ်းစာလာ၏” (ဂလာတိ၃း၁၀)။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်က၊ သင်၏စိတ်နှလုံးကို နာကျင်စေသောအခါ၊ အမှန်တကယ် နာကျင်ခြင်းကို ခံစားကြရပါမည်။
ထိုအခါ အပြစ်သားတို့သည် မိမိတို့၏အပြစ်က ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား၊ သန့်ရှင်းသောဘုရားကို ဆန့်ကျင်နေကြောင်းကို သိနားလည်းလာပါမည်။ “ကိုယ်တော်ကို ပြစ်မှားပါပြီ၊ ကိုယ်တော်ကိုသာ ပြစ်မှား၍ မျက်မှောက်တော်၌ပင် မတရားသောအမှုကို ပြုပါပြီ” (ဆာလံ၅၁း၄)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။
တတိယမြောက် နာကျင်ခြင်းခံစားရခြင်းကား၊ မိမိကိုကိုကောင်းမွန်အောင်မလုပ် ဆောင်နိုင်ပါတကားဟု သိလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့တိုင်အောင် သင်၏စိတ်နှ လုံးသည် ဘုရားသခင်ကိုပို၍ ဆန့်ကျင်နေအုံးမည်ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၊ တင်းကြပ် သောပညတ်တော်ကြောင့်၎င်း၊ ခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်မရှိသောကြောင့်၎င်း ထိုသို့ ခံစားနေအုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဤဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ခံစားမှုထဲ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင့်ပုန်ကန်နေအုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်အပျက်ကို ထောက်ကြည့်သော်၊ သင့်စိတ်နှ လုံးသည် မကျိုးပဲမကြေမွသေးသည်ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ သင်သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိစိတ်မသက်မသာခံစားနေမည်၊ သင့်ကို ဘုရားသခင်သနားခြင်း၊ ဂရုဏာ တော်မပြသသောကြောင့် သင်သည် စိတ်ရှုပ်ထွေးလျှက် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
အပြစ်အကျိုးအပြစ်နှင့် သင်၏ထာ၀ရအသက်တာအတွက်၊ သင်ကြားခံယူပါ၊ အပြစ်ကို ဖေါ်ပြသွန်သင်ခြင်း၌ မရပ်တန့်ပါနှင့် အကြောင်းမှာ၊ သင်သည်ကယ်တင်ခြင်း မရသေး၍ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တတိယ၊ အသက်တာအသစ်ပြုပြင်ခြင်း၌ စိတ်နှလုံးကျိုးပဲခြင်း နည်းလမ်းနှစ် သွယ်ရှိသည်။
ပထမအနေဖြင့်၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော စိတ်နှလုံးရရှိဖို့ရန်၊ သင်၏စိတ်နှလုံးကျိုး ပဲကြေမွရမည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က သွန်သင်ဆုံးမသောအခါတွင်၊ သင်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူ ကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံရမည်ဖြစ်သဖြင့်၊ ထိုအခါ မိမိ၏ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည် ဆိုခြင်းအား ချိုးဖေါက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့အလိုငှါ၊ ယေရှုမှတပါး၊ အဘယ်သူမှ မတတ်နိုင်သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ သင်သည် ဒေးဝိဒ်.ဘရိန်းနက် နည်းတူ “ကျွန်ုပ်တခါတလေတောင်မှ မတွေးဖူးသော ကယ်တင်ခြင်း မို့အံ့ဩမိ၏”ဟူ၍ သင်ပြောပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ယေရှုဘုရားအထံတော်က အံ့ဩဖွယ် ကျေးဇူးမေတ္တာကို သင်သိမြင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် သင့်အပြစ်၏အဖိုးအခ အတွက် ခရစ်တော်အသေခံပေးဆပ်ခဲ့ပြီး၊ သင့်အားဖြောင့်မတ်သောသူ တစ်ယောက်ဖြစ် စေပြီဟူ၍ ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်ရှိပါသလား? သင်သည် ထိုခဏ၌ ထာ၀ရအသက်ကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ အခုဆိုလျှင်၊ သင်သည် ယေရှုတပါးတည်းကိုသာ မျှော်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အား ယေရှုအမှန်တကယ် ချစ်နေသောကြောင့် ယခုတွင် သင်ယေရှု အသေခံပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ရသောကြောင့် ထိုအခါ ယေရှု၏မေတ္တာအမှန်ကို ခံစားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ကျိုးပဲကြေမွသော စိတ်နှလုံး သားတို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါ! ရုဏ်ယူဝင့်ကြွားခြင်းသည် သင့်ကိုသင်ဖယ်ရှားခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သင်သည် “အသေသတ်ခြင်းကို ခံခဲ့သော သိုးသူငယ်သည် ချီး မွမ်းခြင်းခံထိုက်၏” (ဗျာဒိတ် ၅း၁၂)ဟူ၍ ချီးမွမ်းတတ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ငါစိတ်သည် အပြေးလွှား နှောင်းနှေးခြင်းမရှိ
(၁၆၉၇-၁၇၆၉ခုနှစ်၊ ဂါဟတ်.တာစတီဂျန်သီကုံးသော “ကိုယ်တော်ခေါ်
မူသည်”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို၁၈၁၃-၁၈၉၇ခုနှစ်၊ ဂျင်း.အယ်လ်ဘော့သ်
ဒုတိယအနေဖြင့်၊ အပြစ်ထဲနစ်မွန်းပျော်မွေသော သင့်စိတ်နှလုံးကျိုးပဲကြေမွ ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် အမှန်တကယ် ခရစ်တော်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောအခါ၊ သင်သည် အပြစ်ကို မုန်းတီးနေမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်က သင့်အား ဘုရားသခင်နှင့် ခွဲခါစေသောကြောင့် သင်သည် အပြစ်ကိုမုန်းတီးပါလိမ့်မည်။ အပြစ်က ယေရှုအားနာ ကျင်စွာ ကားတိုင်ပေါ် အသေခံစေခြင်း၊ ချွေးမှအသွေးကဲ့သို့ စီးဆင်းစေခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ် အသွေးသွန်းလောင်း၊အသေခံစေခြင်းကြောင့်၊ သင်သည် အပြစ်ကိုရွံ့မုန်း လာမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်က သင့်အား အဘယ်မည်သောကောင်းကျိုးကို မပေးဘဲ၊ ဝမ်း နည်းခြင်းကို ဖြစ်ပွါးစေသောကြောင့် သင်သည် အပြစ်ကို မုန်းတီးနေမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်က သင်နှင့်ယေရှုဘုရား၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖေါက်ဖျက်ကျူးလွန်သောကြောင့် သင်သည် အပြစ်အတွက် ပူဆွေး၊သောကရောက်နေမည်ဖြစ်သည်။
၄။ စတုတ္ထ၊ ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ၊
“ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ယဇ်မူကား၊ ကျိုးပဲသောစိတ်ပေတည်း အိုဘုရားသခင်ကို ကိုယ်တော်သည် ကျိုးပဲကြေမွသော နှလုံးကိုငြင်းပယ် တော်မမူတတ်ပါ” (ဆာလံ၅း၁၇)။
ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်သည်၊ လက်ဝါးကားတိုင်အကြောင်းကို မုန်းတီးခြင်းမှစောင့် ထိန်းပေးပါမည်။ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းမရှိသော နှလုံးသားသည် ထိုကဲ့သို့ တရားဒေသနာ တော်ကို မကြားလိုပေ။ အများသော လူတို့က လက်ဝါးကားတိုင်တရားကို မုန်းတီးကြပါ သည်။ အများသော လူတို့က လက်ဝါးကားတိုင်တရားဟူသည် ဘာဆိုဘာကိုမှ ကောင်း ကျိုးမရှိစေဘဲ၊ အရူးလုပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ကြပါသည်။ လက်ဝါးကားတိုင် တော်အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဟောကြားသောဒေသနာတော် ကြောင့် အချို့သူတို့ပင် အသင်းတော်မှ လှည့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့် တော်မူသည်ကား
“အကြောင်းမူကာ၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကပ်တိုင် တော်တရားသည် တရားသည်မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောငါတို့၌ ထိုတရားသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ (၁ကော ၁း၁၈)။
“အကြောင်းမူကာ၊ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော် ကို ရန်ဘက်ပြု၍ ကျင့်သောသူအများရှိကြ၏” (ဖိလိပ္ပ ၃း၁၈)။
သို့သော် ကျိုးပဲကြေမွသောနှလုံးဟူမူကား၊ လက်ဝါးကားတိုင်တော် တရားကိုဆန့်ကျင် ခြင်းမရှိပါ၊ ကျိုးပဲကြေမွသောနှလုံးသားက၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အကျင့်အားဖြင့် မရရှိနိုင်ဘဲ၊ ခရစ်တော်၏ ကားတိုင်ပေါ် ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်းအားဖြင့်သာ ရရှိသည် ဟု အခိုင်အမာရပ်တည်လျှက်ရှိပါသည်! နှလုံးကျိုးပဲ ကြေမွသောသူသည် လူတို့ဖန်တီး သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအတုဖြစ်သော၊ သဲသောင်ပြင်၌ ထုနှိပ်ထားသော အမှတ်တံဆိတ် မည်၏။
ကျိုးပဲကြေမွသောနှလုံးသည်၊ ယေရှုခရစ်တော်၌ တည်နေသောသူဖြစ်ပါသည်။ ဇာတိပကတိ စိတ်မူကား ယေရှုအပေါ်တည်နေခြင်းမရှိပေ။
“မတရားသောသူတို့မူကား မငြိမ်ဘဲ လှုပ်ရှား၍ရွံ့နှင့်အမှိုက်ကို ပက်သော ပယ်လယ်ရေနှင့်တူကြ၏ (ဟေရှာ၅၇း၂၀)။
နိုးကြားနေသော နှလုံးသား၌ ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပေ၊ ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းကို ထိုသူတို့သည် အပြစ်အတွက် ခံစားကြရသော်လည်း၊ ယေရှုကိုလက်ခံခြင်းမရှိကြပေ။ နှလုံးကြေကွဲသောသူတို့မူကား မိမိတို့အသက်တာတစ်ခုလုံးကို ယေရှုအပေါ်၌သာ ပုံအပ်ကြပါသည်။ ယေရှုဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားလွှမ်းခြုံသောအခါ၊ ထိုသူတို့၌ ကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်မရှိကြတော့ပေ၊ ယေရှု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် “စုံလင်သော မေတ္တာသည် သံဝေဂကို ပယ်ရှားတတ်၏” (၁ယော ၄း၁၈)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်သည် ယေရှုခရစ်နှင့်အမြဲအတူနေလိုသည်။ ကိုယ်တော်သည် သူ့ အတွက် လုံခြုံရာဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့်အတူ ရှိနေလိုပါသလား? သင့်နှလုံးသားက ယေရှုအား လက္ခံယုံကြည်ဖို့ အသင့်ရှိပြီလား? သင်သည် မောပန်းစွာ သင်ကြာနေရပြီး၊ ထာ၀ရအသက်အတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်နေပါသလား? မိမိကိုကို ထာ၀ရအသက်ရှင်ရေးအတွက် ကြိုးစားမှုအားရပ်တန့်ပြီး ယေရှုတပါးတည်းကိုသာ အသက်သခင်အနေဖြင့် ကိုးစားပါရန်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးနေပါသည်! ဓမ္မသီချင်းနံပါတ် (၈)ကို မတ်တပ်ရပ်လျှက် သီဆိုကြပါစို့။
ကျေးဇူးပြု၍ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်လျှက် သီဆိုကြပါစို့၊ အကယ်၍ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသေးပါက၊ အကယ်၍ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ သိလိုပါက ဒေါက်တာကေကန်မှ ဦးဆောင်ပြီး သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်၍၊ ဆွေးနွေးစဉ်းဘက်ဆီသို့၊ ဤဓမ္မသီချင်းသီဆိုစဉ်သွားကြပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လည် အသက်တာအတွက် ဆွေးနွေးပြီး ဆုတောင်းကြဖို့ အခြားအခန်းထဲသို့ သွားကြပါမည်။
ထိုသို့ဖြင့် သင့်အား၊ မကယ်တင်နိုင်
(၁၇၁၂-၁၇၆၈ခုနှစ်၊ ယောဆပ်ဟတ် သီကုံးသော”အပြစ်သားတို့ လာနိုင်ကျူး”)
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်လ်ချန်မှ ဆာလံ၃၄း၁၅-၁၈အထိကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၆၉၇-၁၇၆၉ခုနှစ်၊
ဂါဟတ်တာစတိဂျန် သီကုံးသော “ဘုရားရှင်ဖိတ်ခေါ်နေ”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
“ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ယဇ်မူကား၊ ကျိုးပဲသောစိတ်ပေ တည်၊ အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကျိုးပဲကြေမွသောနှလုံးကို ငြင်းပယ်တော်မမူတတ်ပါ” (ဆာလံ၅၁း၁၇)။
၁။ ပထမ၊ဇာတိပကတိစိတ်နှလုံးသည် ကျိုးပဲကြေမွခြင်းမရှိပါ။ ထွက်မြောက်၈း၁၅၊
လုကာ ၁၆း၃၀၊ မဿဲ၃း၅၊ ရောမ၂း၅၊ ယေရမိ ၅း၃၊ ၂ကော၃း၁၅၊ ဧဖက်၂း၁
လုကာ၈း၁၂၊ ဧဖက် ၂း၁၊ ၄း၁၈၊၁၉၊ ဟေရှာ၂၈း၁၅
၂။ ဒုတိယ၊ နိုးကြားသောစိတ်သည် နာကျင်မှုကို ခံစားစေသည်၊ သို့သော် ကျိုးပဲကြေ မွသော စိတ်မဟုတ်သေးချေ ဂလာတိ ၃း၁၀၊ ဆာလံ ၅၁၄
၃။ တတိယ၊ အသက်တာအသစ်ပြုပြင်ခြင်း၌ စိတ်နှလုံးကျိုးပဲခြင်း နည်းလမ်းနှစ် သွယ်ရှိသည်။ ဗျာဒိတ် ၅း၁၂
၄။ စတုတ္ထ၊ ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ၁ကော ၁း၁၈၊
ဖိလိပ္ပိ ၃း၁၈၊ ဟေရှာယ ၅၇း၂၀၊ ၁ယော၄း၁၈။